Mamy Ravatomanga : Hiakatra Fampanoavana ao Paris -
AccueilRaharaham-pirenenaMamy Ravatomanga : Hiakatra Fampanoavana ao Paris
17/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nandritry ny fotoana naharitra no efa narahi-maso noho ny fanangonan-karena maloto nataony tany Frantsa i Mamy Ravatomanga. Araka ny vaovao marim-pototra avy any an-toerana, dia handalo eo anivon’ny Fampanoavana ao Paris io dosie io. Loham-piampangana azy ny fanangonan-karena tsy ara-dalàna ( fanangonan-karena maloto) izay enjehin’ny lalàna frantsay sy ny lalàna iraisam-pirenena.
Tsy avelan’ny fitsarana frantsay ho vitavita ho azy ny fanangonan-karena tsy ara-dalàna ary miditra lalina amin’izany mihitsy izy ireo. Efa nisy ny fisavana ny tranon’ny vazaha iray antsoina hoe Francis Dubernart ( mpiara- miombon’antoka amin-dRavatomanga) tao amin’ny trano fonenany any amin’ny “ 28 Alée de Canterane, residence du Golfe 33450 Saint Sulpice et Cameyac”, 20 kilaometatra miala an’i Bordeaux. Taorian’io “perquisition” io, dia nisy ny fahatrarana anton-taratasy maro nentina nanaporofo an’io fiampangana an-dRavatomanga io.
Ny Fampanoavana ao Paris no nandray an-tanana ny raharaha tany am-boalohany ary naniraka ny polisy ekonomika frantsay any Nanterre hanao ny fitsirihana sy ny fanadihadiana. Hita tamin’izany fa ny taona 2011 no nanangana “ Sociétés civiles immobilières” SCI tao Frantsa i Mamy Ravatomanga sy ny vadiny. Ny foiben’io orinasa io moa dia tao amin’ny tranon’ilay vazaha voalaza etsy ambony. Rehefa nandeha anefa ny fotoana dia tsapa ny fisian’ny fanangonan-karena maloto nataon-dRavatomanga Mamy, ka izao tonga hatrany amin’ny Fitsarana Frantsay izao ny raharaha.
Tsy mba tahaka antsika gasy ny fampiharan-dalàna any Frantsa. Ny antsika, rehefa mahitahita dia afa-maina na dia hita mivandravandra izao aza fa mpangoron-karena. Fa ny an’ny vahiny, dia arahi-maso sy enjehiny rehefa hita soritra ny fandikan-dalàna tahaka ity dosie Ravatomanga Mamy ity. Tsy mikoso-maso amin’izany mihitsy ny Frantsay satria any amin’ny taniny no miseho ny fandikan-dalàna. Teodorin Obiang Nguema zanaky ny filohan’ny Guinée Equatorial koa dia efa nanokafan’ny Fampanoavana tao Paris fanadihadiana momba ny “fanangonan-karena maloto”, mitovy amin’ity raharaha Mamy Ravatomanga ity.
Nilatsaka tanteraka ny saron-tavan’ny mpanohitra, misakana ny hanatanterahana ny fitsapan-kevi-bahoaka, na referandaoma, izay midika ho fanampenam-bava ny vahoaka malagasy tsy haneho hevitra, ary miezaka mafy mitarika ny adihevitra amin’ny tsy tokony ho izy. Nambaran’ny filoha ...Tohiny